Abwaan Liibaan Cabdikariin Xuseen: “Dharraartii timaadiyo habeenkii dhammaadaba waxaan dhigdhigayaa maasooyin wada dha ah …” (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 29, 2018 3:54 g 1
Abwaan Liibaan Cabdikariin Xuseen waa wiil dhalinyaro ah, sameeyeyna gabayo dhowr ah oo khuseeya arrimaha Bulshada. Waxa uu tixo u tireyey Radio Daljir iyo Madaxweyne Farmaajo, waxaa kale oo uu tiriyey maansooyin farta ku fiiqaya falxumida siyaasiyiinta Soomaalida.
Istudiyaheenna Daljir Bossaso ayuu maanta nagu soo booqday, waxa uuna nooga warramay wax uu ka gabyey horraantiisii iyo sababta ku dhalisay in uu gabyaa noqdo, asaga oo eeddaas jaceyl farta ka saaray.
Wariye Maxamuud Cabdi Ibraahin (MCI) ayuu u waramay.
Abwaan liibaan banahay